Boky vao navoaka, manolotra ireo endrika zara raha nanaovana fikarohana momba ny tetezamita politika sy ny fampahalalam-baovao ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2019 8:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, українська, Español, Italiano, English
Ny sary eo amin'ny fonon'ity boky ity dia mitondra ny lohateny hoe “Twilight”, ary Eaint Thiri Thu mpandray anjara ao amin'ny Myanmar Media in Transition no namorona azy. Araka ny fanazavàny, ny twilight dia ny vanimpotoana eo anelanelan'ny mangiran-dratsy sy ny fiposahan'ny masoandro, tetezamita mitondra antsika ho amin'ny haizina na ny mazava. Eo amin'izay toerana izay no misy ny fahalalahana maneho hevitra ao Myanmar, eo anelanelan'ny haizina sy ny mazava, ny fanantenana sy ny hakiviana.Sary sy famaritana ny boky natolotr'i Gayathry Venkiteswaran, ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Boky iray vaovao navoaka tamin'ny Jona 2019 no manolotra fampahafantarana feno momba ny tantara sy ny toerana misy ny tontolon'ny fampahalalambaovao ankehitriny ao Myanmar.
Ilay boky, mitondra ny lohateny hoe “Fampahalalalambaovao ao Myanmar mandalo tetezamita: ireo Lova, Fanamby ary Fiovàna” dia niarahan'i Lisa Brooten, Jane Madlyn McElhoe, ary Gayathry Venkiteswaran namoaka. Nahitàna ny fiarahana nifandrimbona teo amin'ireo manampahaizana ao Myanmar, ireo mpikaroka, mpikambana anaty vondrom-piarahamonina sivily, mpanakanto ary mpanao gazety izay nanoratra momba ny fiantraikan'ny tetezamita politika tany amin'ny fahalalahana maneho hevitra tao amin'ny firenena ilay boky.
Myanmar, fantatra fahiny tamin'ny anarana hoe Birmania, dia teo ambany fifehezan'ny tafika nandritra ny am-polo taona maro mandra-pametraka ny fanovàna tamin'ny 2010; izay nahafahana nametraka fitantanana sivily indray. Na izany aza, mbola nitoetra nibahan-toerana hatrany ny tafika teny anaty fitantanan-draharaha. Tamin'ny 2015, nisy fifidianana natao nanerana ny firenena ka nandresy lavitra tamin'izany ilay mpanohitra teo aloha National League for Democracy (NLD) notarihan'i Aung San Suu Kyi, ilay nahazo ny Loka Nobel .
Gayathry Venkiteswaran, iray amin'ireo namoaka ilay boky, no manome topimaso fohy momba ilay boky ao anaty imailaka iray nosoratany:
Miresaka taranja maro ilay boky ary manambatra ireo adihevitra ambony latabatra sy izay nanaovana andrana, ary anananay ao ireo mpisehatra sy ny avy eny amin'ny oniversite izay nandray anjara tao anatiny. Marobe amin'ireo toko no nosintonina avy amin'ny asa vitan'ireo vondrom-piarahamonina sivily sy ireo hafa manampahaizana manokana teny an-kianja, sangy ezahanay ny mampifanaraka azy ireny amin'ny toedraharaha ao anatin'ny tantara politika sy ny fampahalalambaovao eto Myanmar ary hamaritra amin'ny fomba tsara indrindra ireny fivoaran-draharaha ireny. Hita ao anatin'ilay boky ireo fandalinana sy fanehoankevitra maro mikasika ny asa fanaovana gazety ary ny fanamby atrehany, ny mozika sy ny famokarana sarimihetsika, ny lazan'ny Facebook ary ny fiantraikany amin'ireo adihevitra politika, sy ny anjara toerana raisiny ao anatin'ny krizy Rakhine, ny hantsana misy amin'ny fenitry ny lalàna ary hatramin'ireo fisaintsainana mavesa-danja momba ny dindo apetraky ny fanohanan'ny media amin'ny media sy ny fiarahamonina sivily ao amin'ny firenena.
Tanisainy ny krizy Rakhine izay miresaka ny fitomboana sy ny fiparitahan'ny herisetra anaty fiarahamonina izay niteraka fifindran-toerana olona an'arivony maro avy amin'ny foko Rohingya tany avaratra-andrefan'i Myanmar. Ampiany ihany koa hoe ny asan'ireo mpanoratra ilay boky dia mifantoka amin'ireo endriky ny tetezamita politika izay tsy mbola nisy fanadihadiana hafa nandalina azy tany aloha:
Hatramin'ny 2010, betsaka ny voasoratra momba ny fiovàna politika, saingy sambany izao no misy boky mifantoka amin'ny fampahalalambaovao, izay mandeha lavitra noho ny resaka asa fanaovana gazety sy ahitàna fomba fiteny feno famoronana ary hatramin'ny teknolojia nomerika ao Myanmar. Sarotra vinaniana ny fomba fandraisana anjaran'ny tetezamita sy ny fiovàna politika, saingy nahatsapa izahay hoe zavadehibe ny mandrakitra ho anaty tahirinkevitra ny niainana ireo fiovàna niantraika tamin'ny fampahalalambaovao, ary antenaina fa io dia hiteraka fifanakalozana hevitra momba ny hoavin'ilay indostria ao amin'ny firenena.
Mbola mavesa-danja kokoa, asiany tsindrimpeo ihany koa ny amin'ny lanjan'ny fahafantarana ny tantaran'ny fampahalalambaovao, ary ny anjara toerany ao anatin'ny tetezamita demaokratika:
Momba ny resaka tetezamita, toherinay ny filazana navoaka momba ny toedraharaha misy ao amin'ny firenena. Ohatra, marobe ireo nihevitra fa talohan'ny fisokafana i Myanmar dia tsy nanana fampahalalambaovao tsy miankina na mpisehatra tamin'izany, na hoe ireo lasitra fampiroboroboana ny fampahalalambaovao any amin'ny firenena hafa dia mety ho an'i Myanmar. Ny hevitra fototra ho an'ilay bokinay dia ny filàna maka fomba fijery ara-tantara sy mifanaraka amin'ny vanimpotoana nisehoany mba hahatakarana tsara ireo fiovàna mitranga, na tsara na ratsy izy ireny.
Ireo namoaka ny boky (havia miankavanana): Lisa Brooten, Gayathry Venkiteswaran, ary Jane Madlyn McElhoe. Sary nahazoana alàlana
Iray amin'ireo fanamby natrehan'ireo mpamoaka ilay boky tamin'ny famenoana ireo fikarohana dia ny fitohizan'ny fampiasana ireo politika fony vanimpotaonan'ny fitondràna miaramila, sy ireo lalàna nataon'ilay lazaina fa governemanta mpikatsaka fiovàna notarihan'ny NLD mba handemena ireo mpanakiana ny tafika:
Betsaka ireo fepetra noraisina raha resaka fiovàna politika ary fony tonga teo amin'ny fitondrana ny governemanta NLD, avo be ny fanantenana hahita fiovàna azo tsapain-tànana ho an'ny fampahalalambaovao sy ny fahalalahana maneho hevitra. Nefa araka ny voamarik'ireo maro nandray anjara, na nisokatra aza ny habaky ny fanehoankevitra, tsy nihena ny fampitahorana atao amin'ireo mpanao gazety sy mpikatroka. Ny mifanohitra amin'izay aza, ny fampiasàna ireo lalàna, na izany ny Andininy faha 66(d) amin'ilay Lalàna momba ny Fifandraisandavitra na ny Lalàna Famaizana, ny Lalàna momba ireo Fikambanana tsy Ara-Dalàna ary ny Lalàna momba ny Tsiambaratelo Ofisialy, dia samy mampiseho fa ny tetikady nataon'ny fitondrana teo alohany ihany no ampiharin'ilay governemanta voafidy tamin'ny fomba demaokratika.
Nametraka olana io ho an'ny fampivondronana ireo loharano isankarazany izay itarafana ihany koa ny toerana misy ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao:
Raha misokatra amin'ny fanehoankevitra ny ankamaroan'ny olona, ny sasany indray misalasala hilaza ny momba ny tenany mandritra ireny fifampiresahana ireny satria matahotra momba ny ainy. Any anatin'ny toko nosoratany, marobe ireo nandray anjara no nanamarika ny mbola maha-olana ny fiantraikan'ny fanivànantena sy ny kolontsain'ny tahotra, indrindra fa rehefa idiran'ny resaka fanakianana ny tafika sy ireo mpitarika avy amin'ny NLD.
Eken'ireo mpamoaka ilay boky ny filàna manao fikarohana misimisy kokoa, indrindra fa momba ny fitompoana ireo fampahalalambaovao, ary manao fandalinana momba ireo fampahalalambaovao amin'ny fiteny ao Myanmar. Mandritra izany, manantena ry zareo hoe hiteraka aingampanahy ho anà fandalinana hafa ilay boky ary fifanakalozankevitra eny anivon'ireo mpiaraka miombona antoka, na izany ivelany, na ao anatin'ny firenena, ka hitondra mankany amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny tetezamita politika sy ireo fanavaozana ny fampahalalambaovao.”
Efa navoaka tao Yangon, Myanmar ary Bangkok, Thailand ilay boky. Afaka raisina ety anaty tambajotra ihany koa ilay boky sy ireo toko voafantina avy aminy.